चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसले भ्रमण वर्ष २०२० प्रभावित हुन सक्ने! -
६ माघ २०७६, सोमबार १०:०९ 61 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ – छिमेकी मुलुक चीनमा फैलिएको निमोनिया जस्तै मानिसको मृत्यु हुने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ। यस्तो खतरनाक भाइरसको डरले विश्वभरिका अधिकांश देशमा कडा सावधानी अपनाइएको छ। के यस्तै प्रयास नेपाल सरकारले पनि गरिरहेको छ? यस विषयलाई लिएर चिकित्सकहरू विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेका छन्।
हाल नेपालमा भ्रमण वर्ष २०२० चलिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढ्दो रहेकोले उनीहरुसँगै उक्त भाइरस लगायतकाे रोग पनि आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
भ्रमण वर्ष २०२० प्रभावकारी भएपछि पछिल्लो केही महिनादेखि चिनियाँ पर्यटकहरूको बृद्धि भैरहेको छ। के नेपाल सरकारसँग कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि कुनै कुनै आपतकालिन व्यवस्था छ की छैन? त्यस तर्फ ध्यान दिन अति आवश्यक रहेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले भने, प्रकोप फैलिएकाे ठाउँबाट आएका विरामीलाई निगरानीमा राखिएको छ। केही दिनअघि अध्ययनका लागि चीन गएका एक ३२ वर्षीय नेपाली विद्यार्थी काठमाडौं आएपछि रुघाखोकी र ज्वरो आए सरुवा अस्पताल अाएका थिए। उनलाई कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि गत अस्पतालमा भर्ना गरेर विशेष निगरानीमा उपचार भइरहेकाे छ।’
चीनको उहानबाटै फर्किएका एक नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गरी पाँच दिनदेखि चिकित्सकहरूको निगरानीमा राखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको हो।
जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयलेसमेत विज्ञप्ती जारी गर्दै एक स्कुले बालिकामा कोरोना भइरस भएको पुष्टि भएको जनाइसकेको छ। ताइवानमासमेत फैलिएकोले नेपाल यसको उच्च जोखिममा रहेको बताइन्छ। धेरै भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्र्याउनु सके देशको पहिचान फैलाउने सकिने सरकारको भनाइ छ। नेपालमा हालसम्म नदेखिएका प्राणघातक संक्रमण पर्यटकसँगै भित्रिने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भ पारेर हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित हेल्थ डेस्कलाई अझ बिस्तार, चुस्त र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ। चीनमा नयाँ भाइरसको संक्रमणबाट फैलिएको निमोनियाका कारण धेरैको ज्यान गइसकेको छ। थाइलाइन्ड, जापान र चीनमा देखिएको यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्ने गर्छ।
चीनमा ४४ जनामा यो भाइरसको संक्रमणपछि निमोनिया भइ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। त्यसमध्ये ११ जनाको स्थिति चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ। धेरैमा ज्वरो मात्र देखिए पनि कसै-कसैलाई श्‍वासप्रश्‍वासमा कडा समस्या देखिएको छ।
सन् २००३ मा चीनलगायत ३० देशमा महामारीको रूप लिएको सार्स र सन् २०१२ मा मध्यपूर्वमा देखिएको मर्सजस्ता प्राणघातक रोग फैलाउने कोरोना प्रजातिको भाइरस नेपालमा मानिसमै देखिएको छ । यससम्बन्धी सेन्टर फर डायनामिक नेपाल (सिएमडिएन)ले सात वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन रिपोर्ट सरकारी अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको उपस्थितिमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताले जटिल प्रकारको निमोनिया फैलाउने कोरोना भाइरस मानिस, चमेरो, हाँस र मुसामा देखिएको बताएका छन् । सरुवारोग अस्पताल टेकुका विशेषज्ञ डा. बास्तोलाले कोरोना भाइरसका विभिन्न प्रजाति हुने बताए । सार्स र मर्स श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हुन् । उँटबाट सर्ने मर्स मानिसबाट मानिसमै पनि सर्छ । सार्स जनावरबाट मानिसमा सर्छ । तर, नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरस सार्स र मर्स नै गराउने होरहोइन भन्नेबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अधिकारीले बताएका छन् ।